थानकोटबाट हराएकी बालिकाको भारतको मध्यप्रदेशबाट उद्धार- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
थानकोटबाट हराएकी बालिकाको भारतको मध्यप्रदेशबाट उद्धार
मंसिर १४, २०७७ सुरेशराज न्यौपाने
काठमाडौं — चन्द्रागिरी नगरपालिका बस्ने १६ वर्षीय बालिका गत ९ मंसिरदेखि हराइरहेको भन्दै उनका अभिभावकले त्यसको भोलिपल्ट काठमाडौं महानगरीय प्रहरीको खोजतलास शाखामा निवेदन दिए ।
थानकोटबाट हराएकी तिनै बालिकाको चार दिनपछि काठमाडौंबाट करिब तेह्र सय किलोमिटर टाढा भारतको मध्यप्रदेश राज्यको इन्दौर नजिकको सिहोर भन्ने ठाउँबाट उद्धार गरियो । कसरी पुगिन् त ती बालिका त्यति टाढा ? कसले पुर्‍यायो उनलाई त्यहाँ ?
अभिभावकको निवेदनपछि प्रहरीले ती बालिकाको खोजी सुरु गर्‍यो । प्रहरीले थानकोट नाकादेखि काठमाडौंबाट बाहिरिने सवारीसाधनहरुमा निगरानी बढायो । तर, प्रहरीले ती बालिका कहाँ गइन् भन्ने कुनै सुइँको पाउन सकेन । प्रहरीले त्यसपछि भारततर्फ गएको हुनसक्ने भन्ने आशंकामा केआई नेपालमा भारतका शाखालाई सम्पर्क गरे ।
थानकोट प्रहरीले ती बाालिकाको मोबाइल ट्रेस गर्दा भारततर्फ गएको जानकारी परिवारलाई दियो । त्यसपछि परिवारले प्रहरीलाई बालिकाको सामाजिक सन्जालमार्फत् भारतमा बस्ने दुई वटा केटासँग सम्पर्क भएको जानकारी गरायो । त्यसपछि परिवारले नेपाल र भारतमा महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध काम गर्दै आएको के आई नेपालको काठमाडौं मुख्यालयमा सम्पर्क गरे । केआई नेपालले बालिकाको सबै जानकारी आफ्नो भारत प्रतिनिधि नविन जोशीलाई दियो ।
त्यसपछि केआई नेपालका भारत प्रतिनिधि जोशीको आग्रहमा दिल्ली प्रहरीसँग मिलेर बालिकासँग सामाजिक सन्जालमार्फत् सम्पर्कमा रहेका दुई जना केटाको नम्बर पत्ता लगायो । शंकाको सुई मध्यप्रदेशको भोपालमा बस्ने महेश नाम गरेको एउटा युवकतर्फ सोझियो । त्यसपछि दिल्ली प्रहरीले मध्यप्रदेशको बालकल्याण समिति (सीडब्लूसी) सँग सम्पर्क गर्‍यो । सीडब्लूसीले तत्कालै मध्यप्रदेशको आष्टा जिल्ला अन्तर्गतको सिहोर प्रहरीलाई युवकलाई पक्राउ गर्न आवश्यक छानबिन सुरु गर्न भन्यो । त्यसछि सिहोर प्रहरीले त्यसपछि ती युवकलाई केरकार गर्‍यो, पक्राउ गरेपछि । प्रहरीको केराकारपछि महेशले बालिकालाई आफूले बोलाएको र इन्दोरबाट एउटा केटीको साथ लागेर भोपाल आउँदै गरेको बताए । त्यसपछि ती बालिकालाई स्थानीय प्रहरी र सीडब्लूसीका प्रतिनिधिले सिहोर भन्ने स्थानबाट उद्धार गरेको हो ।
बालिकाले प्रहरीलाई दिएको जानकारी अनुसार दुई वर्षअघि टिकटक मार्फत् महेश नामको एक युवकसँग सम्पर्क भएको थियो । त्यसपछि उनीहरु फेसबुकमा साथी बनेछन् । त्यसपछि मेसेन्जेर र ह्वाट्स अपमार्फत् उनीहरुबीच नियमित कुराकानी हुने गरेको थियो । स्थानीय प्रहरीका अनुसार ती युवाले बालिकालाई मायाको जालमा पारेर विवाह गर्ने सम्मको प्रलोभन दिएको खुलेको छ ।
विवाह गर्ने भन्दै युवकले बालिकालाई योजनाबद्ध ढंगले भोपाल बोलाएको प्रहरीको दाबी छ । युवकले केटीसँगसम्पर्क गर्न बेग्लै पिटर नाममा फेसबुक आईडी नै खोलेको पाइएको छ । उसले बालिकालाई आफू भोपालको एउटा ठूलो कलेजको मालिक रहेको समेत दाबी गरेको खुलेको छ । जबकी प्रारम्भिक छानबिनमा युवकका पिताले सामान्य मजदुरी गरेर घरखर्च धान्ने गरेको देखिएको केआई नेपालका प्रतिनिधि जोशीले कान्तिपुरलाई बताए ।
बालिकाले परिवारसँग सम्पर्क हुँदा आफू एउटा महिलासँग इन्दोरसम्म आएको र त्यहाँबाट एक जना केटीको साथ लगाएर पठाएको बताएकी छन् । ती महिला र केटी को हुन् भन्ने अझै सम्म खुलेको छैन । केटाले नै ती केटी र महिलालाई ती बालिकालाई भोपाल पुर्‍याउन खटाएको आशंका प्रहरीले गरेको छ । केआई नेपालका जोशीका अनुसार ती केटी र महिलाका सम्बन्धमा पनि प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ ।
बालिकाले प्रहरीलाई बताए अनुसार उनी बुद्ध एअरको जहाजबाट १० मंसिरको बिहान आठ बजेको उडान सिमरा गएकी थिइन् । सिमराबाट रक्सौल नाका १२/१ बजे भारततर्फ गएको र त्यतिबेला एसएसबी र नेपाल प्रहरीले केही नसोधेको बताएकी छन् । तर, कोरोना महामारीका कारण नाकामा निगरानी बढाइएको अवस्थामा उनले सीमा पार गर्दा कसैले पनि नसोधेको भन्ने भनाइ प्रति प्रहरीले विश्वास नगरेको जोशीले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा काठमाडौंको एउटा बालिका त्यो पनि पहिलो पटक भारत आउँदा एक्लै सीमा काटेर भोपाल जान लागेको भन्ने पत्याउन सकिँदैन,’ जोशीले भने ।
उनका अनुसार ती बालिकालाई कसैले चोरबाटोबाट वा योजनाबद्ध ढंगले सीमा कटाएको प्रहरीको आंशका छ । रक्सौलबाट कानपुरसम्म बसमा त्यसपछि लखनउ र त्यहाँबाट इन्दोरसम्म बालिका कसरी पुगिन् भन्नेमा पनि प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ । बाालिकाले प्रहरीलाई बताएअनुसार रक्सौलबाट इन्दोरसम्म एक जना महिलासाथमा रहेको र त्यसपछि अर्को एक जना केटीले भोपाल पुर्‍याउन लागेको बताइकी छन् । प्रहरीले उनको बयानकै आधारमा ती महिला र केटीका बारेमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन प्रहरीले बालिकासँगको भारतको माोबाइलको सिम नभएको हुँदा कसरी लखनऊसम्म पुगिन र त्यहाँबाट इन्दोर जाने बसका लागि चढिन् जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने प्रयास पनि जारी राखेको जोशीले बताए ।
जोशीको भनाइ यो घटना सतहमा हेर्दा मायाप्रेमको देखिए पनि प्रष्ट रुपमा मानव बेचबिखनसँग सम्बन्धित छ । विगतमा पनि केटाहरुले बिहे गर्छु भनेर अनेकन प्रलोभन दिएर भारत बोलाउने र पछि यौन शोषण गरेर बेच्ने र शारीरिक र मानसिक यातना दिएका घटनाहरु सार्वजनिक भइसकेको जोशीले बताए । ‘त्यस्ता पीडित बालिका तथा महिलाहरुलाई हामीहरुले नै उद्धार गरेका छौं यसपटक पनि समयमै सूचना प्रवाह भएकाले बालिकाको उद्धार भयो नत्र जे पनि हुनसक्थ्यो,’ उनले भने ।
उद्धार गरिएकी ती बालिकालाई हाल भोपाल बाल कल्याण समितिको संरक्षणमा स्थानीय बालगृहमा राखिएको छ । कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेपछि घर फिर्ता गरिने जोशीले बताए ।
प्रकाशित : मंसिर १४, २०७७ २०:०७
प्रधानमन्त्री ओलीले भने- 'नेपालको भूभाग चीनविरुद्ध प्रयोग हुन दिन्‍नौं'
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालका भूभाग चीनका विरुद्धमा प्रयोग हुन नदिने बताएका छन् । चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षा मन्त्री वेई फेङहेसँग आइतबार साँझ बालुवाटारमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै नेपाल एक चीन नीतिमा कटिबद्ध रहँदै आएको र त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–चीन बीचका कुनै पनि समस्या नरहेको र घनिष्ठ मित्र रहेको बताएका थिए । ‘हाम्रो बीचमा समस्यारहित सम्बन्ध छ,’ ओलीलाई उदृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने । ओलीले नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहँदै आएको पनि चिनियाँ रक्षामन्त्री वेईलाई प्रस्ट पारे । ओलीले पछिल्लो समय चीन र नेपाल बीचको सम्बन्ध थप उचाई लिएको पनि बताए । ओलीले आफ्नो सन् २०१६ र २०१८ को चीन भ्रमण र त्यस बेला भएका यातायात तथा पारवहन सम्झौताहरु ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो चीन भ्रमण र गत वर्षको अक्टोबरमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणले पनि दुई मुलुक बीचमा विभिन्न सहमति भएको जनाए ।
भट्टराईका अनुसार ओलीले खासगरी कनेक्टिभिटीका सवालमा भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन लाने बाटो नेपाल रहेको बताएका थिए । ओलीले नेपालको आर्थिक विकासमा चीनले सहयोग गरिरहेको छ र नेपालका लागि चीनको सहयोग अपरिहार्य पनि रहेको बताएका थिए । ओलीले खासगरी कोभिड–१९ नियन्त्रण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको र नेपाललाई चीनले गरेको सहयोगको लागि पनि धन्यवाद दिएका थिए ।
भट्टराईका अनुसार चीनका रक्षामन्त्री वेईले नेपाल र चीन बीचमा ऐतिहासिक सम्बन्ध रहिआएको उल्लेख गर्दै त्यसको निरन्तताका लागि पछिल्लो समय चीन–नेपाल बीच भएका सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
‘हामी नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिन्छौं । नेपालले एक चीन नीति र नेपालको भूभाग चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने जुन प्रतिबद्धता गर्दै आएको छ । त्यसको हामी प्रसंसा गछौं,’ वेईलाई उदृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार भट्टराईले भने ।
वेईले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिसँग केही सहमति गरेर आएको र त्यही सहमतिअनुसारै कार्यान्वयन गर्दै जाने पनि ओलीलाई बताएका थिए ।
उनले कोभिडको सन्दर्भमा सहयोगलाई आदान–प्रदान कार्यलाई निरन्तरता दिने पनि बताए । ‘चीनले कोरोना नियन्त्रण गरेको छ, र नेपालले पनि त्यहि गरोस भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ वेईले भने ।
प्रकाशित : मंसिर १४, २०७७ १९:४४